Saraakiil Ka Tirsan Dowlada Imaaraatka Carabta Oo Afghanistan Lagu Dilay. – Calamada.com
Saraakiil Ka Tirsan Dowlada Imaaraatka Carabta Oo Afghanistan Lagu Dilay.
calamada January 11, 2017 1 min read
Qaraxyo culus ayaa ka dhacay magaalada Qandahaar ee xarunta gobalka Qandahaar ee dalka Afghanistan’iyadoona qaraxyadaasi ay sababeen khasaara kala duwan.
Qaraxyada oo loo adeegsaday Camaliyaat Istish-haadi ah oo ay fuliyeen walaalo ka tirsan Katiibada Istish-haadiyiinta Imaarada Islamiga Afghanistan’waxaa qaraxyadaasi lala beegsaday xarunta maamulka gobalka Qandahaar ee magaalada Qandahaar.
Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid afhayeenka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa xaqiijiyay in howlgalkaasi ay fuliyeen rag ka tirsan Imaarada islamarkaana dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil kulan khaas ah uga socday xafiiska maamulka daba dhilifka dalka Afghanistan ee gobalka Qandahaar.
Xubnaha lagu dilay camaliyaatkaasi Istish-haadiyada ah waxaa ka mid ah ku xigeenkii gudoomiyaha gobalka Qandahaar ugu magacownaayÂ xakuumada fadhigeedu yahay magaalada Kaabul kaasi oo lagu magacaabi jiray Cabud Cali Shamsi.
Sidoo kale waxaa weerarka dhimasho iyo dhaawac ku noqday inka badan 30 isugu jirta saraakiil iyo askar kale oo ka tirsan maamulka daba dhilifka dalka Afghanistan.
Sidoo kale xubno Ajaanib ah ayaa lagu dilay camaliyaatka Istish-haadiga ah ee ka dhacay gobalka Qandahaar ee dalka Afghanistan waxaa xubnahaasi ka mid ah shan Diblumaasiyiin oo u dhashay dalka Imaaraatka Carabta’waxaa sidoo kale qaraxyadaasi lagu dhaawacay Jumcatul Kacbiy oo ah safiirka Imaaraatka Carabta u fadhiya dalka Afghanistan.
Dhanka kale labo Camaliyaat Istish-haadi ah oo ay fuliyeen rag ka tirsan Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Kaabul kuwaasi oo lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Xukuumada Kaabul kuwaasi oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen inka badan 70 isugu jirta saraakiil iyo askar fara badan.
Previous: Qarax Ciidamada Kenya Lagula Beegsaday Duleedka Mandheere.
Next: Weerar Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Dhexe.